Zvidzidzo Zvitsva Vanoziva Zvikonzero uye Kurapwa kweRopa Rakagwamba zvine chekuita neCOVID-19 |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Zvidzidzo Zvitsva Vanoziva Zvikonzero uye Kurapwa kweRopa Maropa ane chekuita neCOVID-19
Fluxion Biosciences yakazivisa kuti yayo BioFlux sisitimu yakashandiswa mukutsvagisa paCCIDID-19 uye kugona kwayo kutungamira kune yakakwira mazinga eplatelet coagulation uye nekuwedzera njodzi yethrombosis. Chidzidzo chekutanga, chakaburitswa nechikwata paYunivhesiti yePennsylvania Chikoro cheMishonga, chakaburitswa muna Chivabvu 2021 sechinyorwa mu bioRxiv, uye chakanzi "Kusaina kuburikidza neFcgRIIA uye iyo C5a-C5aR nzira inopindirana neplatelet hyperactivation muCOVID-19". Gwaro rechipiri, rakaburitswa nechikwata paUniversity Hospital yeTuebingen muRopa Advances muna Ndira 10, 2022, rakanzi "Kukwidziridzwa kwecAMP kunodzivirira antibody-mediated thrombus kuumbwa muCOVID-19."
Kunyangwe zvakanyanya chirwere chekufema, COVID-19 yakaratidza kukonzeresa mhinduro dzakasiyana, kusanganisira yakashata pamwoyo. Vamwe varwere vakaratidza mhinduro yekuzvimba iyo inogona kukonzeresa thrombosis, uye kune chiitiko chepamusoro kune avo vane chirwere chakakomba.
Mubepa rekutanga, vaongorori vepaYunivhesiti yePennsylvania vakaratidza varevereri vakakosha vekuzvimba uye chirwere chemoyo muvarwere veCCIDID-19 iyo yakabatana zvakanaka neplatelet activation muBioFlux system. Chikwata chakaratidzawo kuti Syk inhibitor fostamatinib yakadzoreredza platelet hyperactivity muBioFlux kuyedza. Vatsvagiri vakagumisa kuti iyi inomiririra yakasarudzika, inotariswa yekusaina nzira yekugadzirisa iyi mhedzisiro.
Mubepa rechipiri, vaongorori veYunivhesiti yeTuebingen vakaratidza kuti kuderedzwa kwecAMP (cyclic adenosine monophosphate) mazinga mumaplatelet akawedzera antibody-induced platelet coagulation uye thrombus kuumbwa. Migumisiro iyi yakadziviswa neIloprost, chirwere chechipatara-chakabvumirwa chekurapa chinowedzera intracellular cAMP mazinga mumaplatelet.
Mapepa ese ari maviri aivimba neBioFlux system yekuongorora platelet kushanda muvarwere veCOVID-19. Iyo BioFlux sisitimu inoita se "artery pane chip" iyo inonyatso kudzora sero diki-zvakatipoteredza kutevedzera mamiriro mumuviri wemunhu, ichipa yakanakira puratifomu yekutsvaga basa reropa rine chekuita neCCIDID-19. Inoshandiswa mumarabhoritari anopfuura mazana mashanu pasi rose, iyo BioFlux sisitimu inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana kuti isangane nezvinodiwa zvekushandisa chero rabhoritari. Masisitimu anowanikwa aine huwandu hwekugona uye kuburikidza nekubuda uye anoshandiswa mukutsvagisa kwekutanga kuburikidza nekuwanikwa kwezvinodhaka uye kuvandudzwa kwekuongorora.
Kurambidzwa kwendege kwakawedzerwa kune 11 airports kumaodzanyemba kweRussia